Homeလေလံပွဲလေလံခဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အရင်းအမြစ်များကိုသောက်သုံးသူ Work များကရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် SSG နှင့်ထိုင်းအစိုးရကရိန်း NDT စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များ
20 / 04 / 2018 Levent Ozen လေလံခဲ, လေလံပွဲ, အထွေထွေ, SERVICES လေလံ, Institute, တူရကီ, TCDD 0
TCDD Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု
အရင်းအမြစ်များကိုသောက်သုံးသူ Work များကရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့်ထိုင်းအစိုးရကချီစက် SSG နှင့် NDT စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များ
က) အမည်: TCDD Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု
ခ) နေရပ်လိပ်စာ: Selimiye Iskele Mah ။ Burhan Felek CAD ။ အမှတ် 1 Uskudar / အစ္စတန်ဘူလ်
ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 02163488020-4707-4985
ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 02163451705
င) e-mail လိပ်စာ alizengin@tcdd.gov.t ဖြစ်ပါသည်
f) အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်အဲလစ်သူဌေး၏သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
က) အမည်:35 SSG နှင့်ထိုင်းအစိုးရကရိန်း NDT စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များဂဟေအက်ကြောင်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းရေးအလုပ်အာကာသနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။
ခ) IRB အမှတ် 2018 / 168102 မှတ်တမ်းတင်
ဂ) ပမာဏနှင့်အမျိုးအစား: 1 (က)
ဃ) Place: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု
ဝယ်ယူရေး၏ခ) လိပ်စာ: TCDD Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု
ဂ) တင်ဒါနေ့စွဲ: 09.05.2018
ဃ) တင်ဒါအချိန်: 14: 30
င) အဆိုပါတင်ဒါကော်မတီအစည်းအဝေး Place: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpasa ရထားဘူတာတွင် CCTV ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ်ပြတ်ရွေ့ရှင်းလင်းယောဘသည် 09 / 12 / 2016 Haydarpasa ရထားဘူတာတွင် CCTV ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 ၏ပြတ်ရွေ့ရှင်းလင်းစီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်အလုပ်အကိုင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ရှောင်တည်ဆောက်နေHAYDARPAŞA GAR CCTV ပိတ်တိုက်နယ်ကင်မရာစနစ်ပျက်ကွက်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 547267 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD 1 ။ ) ရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး 34716 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခဒေသန္တရတယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2163488020 - 2163362257 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: များ၏ Gantry ချီစက် Boom ကို Maintenance လုပ်ငန်းသည်အထိ Fantuzzi -Regı 31 / 10 / 2014 လေလံ AND SUBJECT ကို FOR TCDD Gantry ချီစက် Boom ကို Maintenance လုပ်ငန်းတင်ဒါသည်အထိ Fantuzzi -Regı၏İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 97 Alsancak / IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ကို: (0232) 463 16 00 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: (0232) 463 22 48 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: İzmirlimansatinalma@Gov.tဖြစ်ပါတယ်။ ဃ။ f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: စာသားÖZYILMAZ / ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးလက်ထောက်။ Burhan Wolf / ဗျူရိုအကြီးအကဲ 1.2 ။ အဆိုပါတင်ဒါလေလံ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ထိုင်းအစိုးရကချီစက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 25 / 02 / 2014 လေလံ AND SUBJECT ကို FOR TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုထိုင်းအစိုးရကချီစက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနူးညံ့ Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 97 Alsancak IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ကို: (0232) 463 16 00 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: (0232) 463 22 48 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: İzmirlimansatinal Up ကို @ gov.t. ဖြစ်ပါသည် ဃ။ f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: Serdar Burhan ENSARİ-ဆိပ်ကမ်း Yrd./ Wolf / ဗျူရိုဦးစီးချုပ် 1.2 işl.mဖြစ်ပါတယ်။ လေလံ, နုအကြောင်းကိုအထက်ပါလိပ်စာနှင့်သတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpaşaဆိပ်ကမ်း 12 နှင့် 17 အမှတ်ထိုင်းအစိုးရကစက်မှုပြုပြင်ရေးအောင်၏ရိန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 07 / 09 / 2017 လေလံအပိုဒ် 12- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 17 TO သို့ RELATED နူးညံ့သော, ပြဿနာများကိုပြုစက်မှုအလုပ် TCDD HAYDARPAŞAဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးHaydarpaşaဆိပ်ကမ်း 1 နှင့် 1.1 အမှတ်ထိုင်းအစိုးရကရိန်းပြုပြင်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) HAYDARPAŞAဆိပ်ကမ်း Operation Manager ခ) လိပ်စာ: SELIMIYE မိန်းမဆောင် ISKELE လမ်းပေါ်မှမိန်းမဆောင် - Üsküdar / အစ္စတန်ဘူလ်ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 2163488020 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 2163451705 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: f) အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ် 2163451705 1.2 ၏သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းနုနှင့် ပတ်သက်. လေလံသတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆောက်အဦး၏သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖျော်ဖြေနယူးဂိုဒေါင်နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ Izmir ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် Fenner စစ်ဆေးရေး Deficiency ၏ဓာတ်လှေကားရှင်းလင်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးကိုတွေ့ 18 / 03 / 2015 Izmir ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဂိုဒေါင်နှင့် Fenner စစ်ဆေးရေး Deficiency သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) IZMIR ဆိပ်ကမ်း Operation Manager Izmir ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဂိုဒေါင်နှင့် New အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဆောက်အဦးမှာတွေ့ရှိဓာတ်လှေကား၏သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖျော်ဖြေနှင့် Fenner စစ်ဆေးရေး Deficiency ၏အဆောက်အဦးရှင်းလင်းရန်န်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမှာတွေ့ရှိဓါတ်လှေကား၏သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖျော်ဖြေနယူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်း၏ကိုးကွယ်ရာဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေးပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 အပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 28614 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ataturk cad.no:xnumx 97 Alsancak KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်း ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ray Butt ဂဟေဆော်ခြင်းစက်Yaptırılacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဗန်-Kapıköyလိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: + 98 745 99-063 + Split ကျောက်ရိုးနှင့်လုပ်ခြင်းအတွက်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpasa ရထားဘူတာတွင် CCTV ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ကင်မရာစနစ်ပြတ်ရွေ့ရှင်းလင်းယောဘသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: များ၏ Gantry ချီစက် Boom ကို Maintenance လုပ်ငန်းသည်အထိ Fantuzzi -Regı
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpaşaဆိပ်ကမ်း 12 နှင့် 17 အမှတ်ထိုင်းအစိုးရကစက်မှုပြုပြင်ရေးအောင်၏ရိန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆောက်အဦး၏သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖျော်ဖြေနယူးဂိုဒေါင်နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ Izmir ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် Fenner စစ်ဆေးရေး Deficiency ၏ဓာတ်လှေကားရှင်းလင်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးကိုတွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Halkalı လွတ်ကွန်တိန်နာ၏ Fantuz တည်းဖြတ်မူအဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ပါလိမ့်မည် cranes
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အ archive ကိုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏ပြည်သူ့ Plan ကိုနောက်ထပ် Plan ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်နေသည်, သတ်မှတ်ချက်နှင့် Consultancy Services မှပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးအကြံပေးအလုပ်၏နယ်စပ်ရေးရာသိမ်းယူမှု၏ဟုမှတ်သားနေပါသည်